Hal qof oo ku dhintay madaafiic looga shaki qabo al-Shabaab oo lagu garaacay magaalada Baydhabo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaHal qof oo ku dhintay madaafiic looga shaki qabo al-Shabaab oo lagu garaacay magaalada Baydhabo
Hal qof oo ku dhintay madaafiic looga shaki qabo al-Shabaab oo lagu garaacay magaalada Baydhabo
August 6, 2016 Abdi Omar Bile Somalia, South-Central 0
Magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed, Soomaaliya.
Baydhabo-(Puntland Mirror) Madaafiic loo malaynayo in ay rideen maleeshiyada al-Shabaab ayaa ku dhacay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay, Koonfur Galbeed Soomaaliya, sida ay sheegeen ciidamada AMISOM iyo booliiska Baydhabo maanta oo Sabti ah.
“Maleeshiyaad looga shaki qabo al-Shabaab ayaa madaafiic ku garaacay saakay deegaan ay daganyihiin dad shacab ah oo kuyaala magaalada Baydhabo,” sidaa waxaa bogooda rasmiga ah ee Twitter-ka ku sheegay AMISOM.
Mid kamid ah madaafiicda ayaa ku dhacay isbitaal sida ay sheegeen AMISOM, balse ma aysan sheegin khasaaraha ka dhashay.
Saraakiisha booliiska Baydhabo ee maamulka Koonfur Galbeed oo warbaahinta maxaliga ah la hadlay ayaa sheegay in hal qof oo dumar ah ay ku dhimatay madaafiicda saakay lagu garaacay magaalada, saddex qof oo kalena ay ku dhaawacmeen.
Bishii lasoo dhaafay ayaa sidaan oo kale madaafiic lagu garaacay Baydhabo waxaa ku dhintay ugu yaraan saddex qof, kadib markii madaafiicda ay ku dhaceen gurigooda.
July 12, 2016 Video: Garaad Abshir Saalax Maxamed oo lagu aasay tuulada Balicad
August 8, 2016 Ugu yaraan hal qof oo shacab ah ayaa ku dhintay, afar askari oo ciidamada DFS ahna waa ay ku dhaawcameen qarax miinada dhulka lagu aaso ah oo ka dhacay Muqdisho
June 25, 2016 Ugu yaraan 7 qof oo ku dhimatay weerar ay al-Shabab ku qaadeen huteel Naasahablood oo ku yaala Muqdisho
Soomaalida kunool gobolka Maine ee Maraykanka oo ka banaanbaxay hadal uu dhawaan jeediyay Donald Trump
Maxaabiis Al-Shabaab ah oo ka baxsaday xarun dhaqancelin oo kutaala magaalada Garoowe
Garoowe-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 10 katirsan maxaabiis Al-Shabaab ah ayaa ka baxsaday xarun dhaqancelin oo kutaala magaalada Garoowe, sida uu sheegay sargaal katirsan laamaha ammaanka. Sargaalka ayaa intaas ku daray in mid kamid ah baxsadayaasha [...]
Diktoorkii lafaha ee ugu weynaa Puntland oo geeriyooday
Garoowe-(Puntland Mirror) Diktoor Saalax Xaaji Cabdullaahi oo ahaa dhakhtar caan ah oo ku takhasusay lafaha ayaa xalay ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Diktoor Saalax ayaa isbitaalka lafaha ee ugu weyn Puntland ku lahaa [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Munaasibada sanadguurada 60-aad ee ciidanka xooga dalka Soomaaliya ayaa la joojiyay, taasoo qeyb ka ah dadaalada looga hortagayo faafista cudurka coronavirus, sida ay sheegeen saraakiisha ciidanka. Xuska ayaa waxaa qeyb ka ahaa gaado-kaciyaarka [...]